Myanmar launches TradeNet 2.0 for easier export/import license application | Myanmar Business Today
HomeBusinessMyanmar launches TradeNet 2.0 for easier export/import license application
The Ministry of Commerce has launched Myanmar TradeNet 2.0 aiming to provide an easier and faster online platform for applying for export/import license/permit.
The Myanmar TradeNet 2.0, an upgraded version for all the processes and procedures related to commerce under the Ministry of Commerce, was launched stage by stage starting from November 1.
To apply for the license online through the platform, the users need to registeraTradeNet 2.0 and then will be able to apply for exporter/ importer registration, which will allow them to apply foralicense.
The system can handle exporter/import registration and certificates and applications for Country of Origin (CO) Form, connect the trade-related governmental departments so that they can send/receive data and provide access to government agencies that issuearecommendation letter.
For the details, users can visit www.myanmartradenet.com.
ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ လိုင်စင်၊ ပါမစ်များကို Myanmar Tradenet 2.0 စနစ်အသုံးပြု၍ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း ကုန်သည်စက်မှု အသင်းချုပ်မှ သိရသည်။
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာနတွင် လက်ရှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ကုန်သွယ်မှုနှင့် ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းစဉ်များ ကို အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည့် Myanmar Tradenet 2.0 စနစ်အား ၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ( ၁ )ရက်နေ့မှစတင်၍ အဆင့်လိုက် လွှင့်တင်လျက်ရှိရာ စနစ်အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက် ၍ ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်များထံ ဒုတိယအကြိမ် အသိပညာပေးရှင်းလင်းခြင်းကို နိုဝင်ဘာလ (၆)ရက်နေ့က Virtual Online စနစ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Myanmar Tradenet 2.0 တွင် ပို့ကုန်သွင်းကုန် ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများကို အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် လျှောက်ထားခြင်း၊ ထုတ်ပေးခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင် ကြောင်း သိရသည်။
TradeNet 2.0 တွင် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ လိုင်စင်၊ ပါမစ်များ လျှောက်ထားနိုင်ရန်အတွက် ပထမ ဦးစွာ Tradenet 2.0 အသင်းဝင်ဖြစ်ရန်လိုအပ်ပြီး အသင်းဝင်ဖြစ်ပြီးပါက ပို့ကုန်သွင်းကုန် လုပ်ငန်း ရှင် မှတ်ပုံတင်ခြင်း (ပသက) လျှောက်ထား နိုင်ကြောင်း သိရသည်။ (ပသက)ရရှိပြီးပါက ပို့ကုန်သွင်းကုန် လိုင်စင်၊ပါမစ်များအား ဆက်လက် လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
Tadenet 2.0 စနစ်တွင် ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများအဖြစ် ပို့ကုန်သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်နှင့် ဆက်စပ် ကတ်များ၊ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင် ပါမစ်၊ လိုင်စင် အတွက်လိုအပ်သည့်ထောက်ခံချက်ပေးသည့်အစိုးရဌာနများ၊အဖွဲ့အစည်းများမှစနစ်အတွင်းဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ ကုန်သွယ်မှုဆက်စပ်ဌာန များနှင့် အီလက်ထရောနစ် ဒေတာအပြန်အလှန် ချိတ်ဆက်ပေးပို့နိုင်ခြင်း၊ ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံ လက်မှတ် (CO) Form များထုတ်ပေးခြင်းစသည့် လုပ်ငန်းရပ်များကို အွန်လိုင်းမှလျှောက်ထားခြင်း၊ ထုတ်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက် နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုကိစ္စရပ်များအတွက် အသေးစိတ်သိလိုပါ က Website Address www.myanmartradenet.comတွင်လေ့လာနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
Next articleGovt to provide accommodation fees to its employees foradomestic trip